🥇 ▷ Pangu Untether 0.4 ayaa dhaqsi u imaan doonta si ay u xalliso dhiqlaha iyadoo la adeegsanayo qalabka 'iOS 8 Jailbreak AVAILABLE'! ✅
Pangu Untether 0.4 ayaa dhaqsi u imaan doonta si ay u xalliso dhiqlaha iyadoo la adeegsanayo qalabka ‘iOS 8 Jailbreak AVAILABLE’!
Xirmooyinka Pangu Untether 0.4 ayaa la heli doonaa maalmaha soo socda
Kooxda caanka ah ee Pangu, horumariyeyaasha ka masuulka ahaa furitaanka iPhone iyo iPad Jailbreak oo wata iOS 8, ayaa shaaca ka qaaday in nooca 0.4 ee baakadka Pangu Untether dhowaan la heli doono, kaas oo la rakibay inta lagu gudajiro nidaamka Jailbreak oo cusboonaysiintiisu u imaan doonto si loo saxo qaladaad dhowr ah oo ay bixiso xasillooni weyn.
Pangu waxay bilaabi doontaa xirmada ‘Internether 0.4’ si loo saxo khaladaadka muhiimka ah
Jailbreak of iOS 8, nooca cusub ee nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple, ayaa horeba loo heli karaa laba toddobaad. Si kastaba ha noqotee, waa maalmo yar ka dib markii aan dhihi karno in kala-goysyada iPhone iyo iPad ee leh iOS 8 ay xasilloon yihiin oo ay heli karaan dhammaan adeegsadayaasha, inay noqdaan kuwo aad u sax ah tan iyo markii uu baxay Pangu 1.1, illaa iyo hadda waxaa la heli karaa noocii ugu horreeyay ee Jailbreak-ga oo loogu talo galay horumarinnada iyo adeegsadayaasha horumarsan.
In kasta oo casriyeyntii ugu dambeysay ee xirmada Pangu Untether ay u ahayd nooca 0.3, waxay umuuqataa inay jireen isticmaaleyaal fara badan oo bilaabay inay ka cawdaan maxaa yeelay, kadib markay cusbooneysiiyaan xirmadaan waxay bilaabeen inay dhibaatooyin ku yeeshaan dib u soocelinta fiidiyowyada iyada oo loo marayo Safari, aaladda webka macruufka ee iOS. , kadib markii aad sameysay Jailbreak. Dhibaatadan ka sokow, adeegsadayaashu sidoo kale waxay tilmaamayaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka dib u bilaabidda aaladda, kuwaas oo ah waxay u badan tahay in ay sababtay dib u soo celinta gurmad iTunes kadib markii la joojiyay is-dhexgalka ama adoo ku rakibay tweak aan wali la taageerin.
Arrintan la xiriirta, kooxda Pangu waxay caddeeyeen inay ka shaqeyn doonaan inay ku saxaan dhibaatooyinkaas cusbooneysiin cusub oo xirmada barta ‘untether’.
Go’aanka Pangu8 0.3 wuxuu u xalliyaa arrinta bilaabidda xarig-googa. Sidoo kale 0.4 ayaa dhaqsi u imaan doona si loo xaliyo qatarta safari.
– PanguTeam (@PanguTeam) Noofambar 3, 2014
Adeegsadayaasha ku xayiran dib-u-soo-celinta ka dib marka la rakibo 0.3, arrinta ayaa dhab ahaantii sabab u ah dib-u-soo-celinta gurmad. Ka akhriso ogeysiiska http://t.co/pTo3gCrdmg
Pangu ee kombiyuutarada Mac wali wey ku jirtaa horumarka
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waa maalmo kooban oo keliya in kooxda Pangu ay soo saartay nooca ugu xasilloon ee aaladdeeda loogu talagalay iPhone Jailbreak oo leh iOS 8 iyo Imaanshaha baakad Pangu Untether 0.4 ayaa la filayaa maalmaha soo socda.
Qalabkan waa inaan sidoo kale sheegnaa inay hadda tahay kaliya kombiyuutarada leh nidaamka hawlgalka Windows, adeegsadayaasha Mac waa inay muddo dheer sugaan Pangu for OS X wali waa la socdaa.
Hadaad rabto inaad jabiso iPhone 6, 6 Plus iyo aalado kale Apple With Pangu 1.1, waxaan kugula talineynaa tusaha talaabada-talaabo ah.
Sidii la filaayay, kooxda Pangu waxay si dhakhso leh uga shaqeeyeen waxkasta oo laxiriira qalabkooda si ay iskugu xidhaan iPhone iyo iPad oo leh iOS 8, kiiskan xirmada Pangu Untether 0.4 xirmada ayaa hadda la heli karaa iyo xallinta dhibaatooyinka la xiriira Safari, iyo riwaayadaha kale.